Home copy - VERTEX ANIMATION STUDIO
No.158, Room 25, 6th floor 47th Street, Botahtaung Township. Yangon. Ph: 095170915 . Email: vertex.ttt@gmail.com
3D Training video lessons Course
​Online မှတိုက်ရိုက် သင်ကြားရန် အဆင် မပြေသူများ အတွက် Video Lessons များနဲ့ Selflearning ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် စီစဥ်ပေးထားပါတယ်။ ပုံမှန် သင်တန်းမှာ သင်တဲ့ lessons များကို အပြည့်အစုံ video ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ သင်ခန်းစာ များကို ဆရာအကူအညီ မလိုပဲ ကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်နိုင် အောင်အထူး ဂရုစိုက်ပြီးသင်ကြားပေးထားပါတယ်။
Vertex Animation Studio မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ၊ ကြေ်ငြာ များစွာတွင် လူသိများသော3D animation များနှင့် computer special effect များစွာကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
Vertex Animation Studio မှ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ TV ကြေ်ငြာ များတွင် သုံးသော 3D animation နှင့် computer special effects များကို အရည်အသွေး မြင့်မားစွာ ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
TV Commercial, Motion Graphic
3D animation ကိုစိတ်ဝင်စားသော လူငယ်များအတွက် Vertex Animation Studio မှ computer သင်တန်းများကိုလည်း 2009 ခုနှစ်မှ စတင်ကာ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
Computer သင်တန်းများကို ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို များအတွက် 3D animation နှင့် Effect များကို ပြုလုပ်ပေး နေသော ဆရာသူရသိန်းတင် ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးပါသည်။
Animation Project များကို လက်တွေ့ ပြုလုပ်နေသော ဆရာ ကိုယ်တိုင်သင်ကြား ပေးသော သင်တန်း ဖြစ်သဖြင့် လက်တွေ့နှင့် သီအိုရီကို အခ ျိုးက ျ ရောစပ်ပြီး လက်တွေ့ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ဦးစားပေးပြီး သင်ကြားပေးသော သင်တန်းများ ဖြစ်သည်။ သင်တန်း များတွင် software များကို တစ်ခု ချင်း သင်ကြားသော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ပါက တခြား software များနှင့် မည်သို့ ဆက်စပ် လုပ်ဆောင်ရမည် ကိုပါ နားလည်သဘောပေါက်အောင် သင်ကြားပြသ ပေးပါသည်။
တကယ်တတ်အောင် သင်ကြားပေးသော ကြောင့် Vertex Animation Studio မှ သင်တန်းဆင်း ပြီးသူများမှာ ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ Animation ပြိုင်ပွဲ များတွင် ဆုရသူများ ပေါ်ထွန်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်။​
​Vertex Animation Studio မှ 3D Blender သင်တန်းများကို on-line မှ တိုက်ရိုက်သင်ကြား ပေး‌နေပါသည်။
သင်တန်းများမှာ Video Lesson များနဲ့ သင်ကြားတာ မဟုတ်ပဲ ။ ဆရာကိုယ်တိုင်မှ online မှ တိုက်ရိုက်သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသား တစ်ယောက်ချင်း စီရဲ့ လိုအပ်ချက် အရ လိုအပ်သလို ဖြည့်စွတ် သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 3D အ‌‌ေခြခံ ရှိသူရော အခြေခံ မရှိသူရော အဆင်တပြေ တက်နိုင်ပါတယ်။
သင်တန်း က onlineမှ သင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်ပြေ မပြေ တပတ် စမ်းတက်ကြည့် နိုင် ပါတယ်။ သင်ရတာ အဆင်ပြေမှ သင်တန်း‌‌ေကြး ပေး လို့ ရပါတယ်။
Phone: 095170915 ကိုဆက်သွယ်စုံ စမ်းနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး - 400 000 ကျပ်
သင်တန်းကာလ - တပတ် (၂) ရက် ၊ (၂) လသင်တန်း​
သင်တန်း အချိန် - 9:00 a.m to 12:00 noon ( OR ) 2:00 p.m to 5:00 p.m
​နေ့ရက် -- Saturday and Sunday ( OR ) Monday and Tuesday
1. Blender General Course
2. Blender Sculpting Course